अख्तियारकाे प्रमुख आयुक्तमा जोशी, आयुक्त बन्न नेताको दैलोमा दौडधुप ! - नेपालबहस
अख्तियारकाे प्रमुख आयुक्तमा जोशी, आयुक्त बन्न नेताको दैलोमा दौडधुप !
| १५:२२:०३ मा प्रकाशित
२८ भदौ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे आज बिदा हुदैछन् । अनिवार्य अवकाशका कारण घिमिरे प्रमुख आयुक्तका रूपमा झण्डै दुई बर्षको कार्यकाल बिताएर बिदा हुन लागेका हुन् । उनको बिदाईमा आज अख्तियार कार्यालय टंगालमा विशेष सभाको आयोजना गरिएको छ ।
आयुक्त बन्न नेताहरुको दैलोमा !
प्रमुख आयुक्त अख्तियारबाट बिदा हुन लागेसँगै अहिले रिक्त रहेकाे आयुक्तका लागि चर्को लबिङ चलिरहेको छ । आयुक्त बनाई दिन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ढोकामा लबिङ गर्नेको संख्या बढ्दो छ ।
अख्तियारमा अहिले डा. सावित्री थापा गुरुङ र डा. गणेशराज जोशी मात्र छन् । घिमिरेपछि गुरुङ र जोशीमात्रै अख्तियारमा हुनेछन् । अरु तीन आयुक्तको सीट भने खाली छ ।
तीन जना आयुक्तका लागि झण्डै ६ जनाको लबिङ चर्को छ । खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीको कोटाबाट नियुक्त गर्न माग गर्दै पूर्वगृहसचिव प्रेमकुमार राई र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल चर्को लबिङमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले दुई मध्ये एक जनालाई आयुक्तमा सिफारिस गर्ने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ ।
यस्तै आयुक्तको दौडमा पूर्वएआईजी जयबहादुर चन्द र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख दीलिपकुमार रेग्मी पनि छन् । चन्दलाई सरकारले आईजीपीमै नियुक्त गरेपनि उनले शपथ खान पाएनन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले चन्दलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो ।
तर नियुक्त गरेको केही घण्टामै आईजीपी दौडमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा नियुक्त बदर गर्न माग गर्दै रिट हाले । सो रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगायो ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा किर्ते गरेकाे आराेप लागेका सिलवालको चलखेलले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीलाई समेत विवादमा तानेको थियो । पछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चन्द र सिलवाल दुवैलाई पन्छाएर प्रकाश अर्याललाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो ।
त्यतिबेला कांग्रेस निकटका चन्दलाई आईजीपी बनाउन नसकेका देउवा अहिले आयुक्त बनाउने योजनामा छन् । अरु थप दबाब र विवाद भएन भने देउवाले कांग्रेस कोटाबाट चन्दलाई सिफारिस गर्ने सम्भावना छ । यद्यपि रेग्मीको सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको स्रोतको भनाई छ ।
प्रचण्डको सिफारिसमा गुरुङ प्रमुख आयुक्त बन्दै
आजदेखि एक महिना विधिपूर्वक गरिने स्वस्थानी व्रत एवं माघस्नान शुरु ७ घण्टा पहिले
लार्के खोलाबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी थप गरिने ४ दिन पहिले
जिम्मेवारीपूर्ण जागिर सुरक्षा गार्ड तर पारिश्रमिक न्यून ! १ हप्ता पहिले
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले माग्यो कर्मचारी ( विवरण सहित ) २ हप्ता पहिले
भरतपुर अस्पतालमा अत्याधुनिक आकस्मिक कक्ष बनाइने २ हप्ता पहिले
कास्कीका दुई पालिकामा पशुमा खोरेत रोगको प्रकोप ६ दिन पहिले
नेकपा: दुवै खेमाको तानातानमा कांग्रेस १ हप्ता पहिले
र्याली अफ होप : विश्व नेताहरूले भने, ‘मानवता बचाउन विश्व एकजुट हुनुपर्छ’ ६ महिना पहिले
म्यानचेस्टर युनाइटेड युरोपा लिग क्वार्टरफाइनलमा ६ महिना पहिले
‘घाँसको राजा’ वरसिमबाट आम्दानी बढाइँदै ४ दिन पहिले